चुट्किलाः प्रेमी र प्रेमिकाबीचको रमाइलो गफ - Everest Dainik - News from Nepal
चुट्किलाः प्रेमी र प्रेमिकाबीचको रमाइलो गफ
प्रेमिकाः के तिमी मलाई साँच्चिकै माया गर्छौ ?
प्रेमीः हो भनेको, मैले हिजै आफ्ना प्रेमिकाहरूको लिस्ट हेरेर कन्फर्म गरेको ।
राम र श्यामसँग कुरा गर्दै थिएँः श्यामः मेरी प्रेमिका मलाई यति धेरै माया गर्छे तर आजसम्म ऊ मँसग बोलेकी छैन ।
याे पनि पढ्नुस धमाकेदार चुट्किलाः डाक्टरसँग बिरामीको यस्तो गुनासो
श्यामः (अचम्म पर्दै) हँ, किन नबोलेको ?
रामः मेरी प्रेमिका बहिरा छ क्या !
प्रेमीः बिहान खोइ कसको अनुहार देखिएछ, आज दिनभर एक सिता अन्न पनि पेटमा परेको छैन ।
प्रेमिकाः मैले भनेको मान्दैनौ, त्यो तिम्रो बेडरुममा भएको ऐना हटाइदेऊ, नत्र सधैं त्यस्तै होला ।
याे पनि पढ्नुस रमाइलाे मुक्तक : केटा र केटीः को कस्तो ?